वास्तुशास्त्र : दाम्पत्य सुखका लागि शयन कक्ष? | eKhabarSanjal
Home जीवनशैली वास्तुशास्त्र : दाम्पत्य सुखका लागि शयन कक्ष?
हरेक अमावश्यामा कालो तिललाई उत्तर-पश्चिम कुनामा सजाएर राख्नुहोस् ।
विवाहित जीवनमा खुशी चाहनुहुन्छ भने ध्यान राख्नुहोस् कि शयनकक्ष हावा बहने र शान्त हुनुपर्छ । कोठामा भइरहेको कुराकानीको आवाज बाहिर जाने खालको नबनाउनुहोस् । यसले विवाहित जीवनमा मिठास ल्याउँदैन । शयन कक्षको वास्तुकलाको बारेमा केही जानकारी तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
-सुत्ने कोठा घरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंश हो । यहाँ राखिएको सबै कुराले विवाहित जीवनमा प्रभाव पार्छ । जस्तै फोटो, फूलको भाँडो, पलंग आदि । शयन कक्षमा श्रीमान् र श्रीमतीले सँगै आफ्नो हँसिलो फोटो राख्ने गर्छन् । तर फोटो आफू सुत्ने खाटको खुट्टापट्टि नराख्नुहोस् ।
-हरेक अमावश्यामा कालो तिललाई उत्तर-पश्चिम कुनामा सजाएर राख्नुहोस् ।
-रोमान्स र गोपनीयता कायम राख्नको लागि ध्यान दिनुहोस् कि शयनकक्षको झ्याल अर्काे कोठासँग राख्नु हुन्न ।
-मनी प्लान्टहरू आपसी प्रेम र शयनकक्षको सौन्दर्यको लागि पनि रोपिएका हुन्छन् । मनी प्लान्ट रोपेपछि पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध मीठो हुन्छ भन्ने मान्यता वास्तु शास्त्रमा पाइन्छ । ।
-शयनकक्षमा हल्का गुलाबी रंगको किरण पर्दा दम्पतीहरूमा प्रेमभाव जाग्छ भन्ने मान्यता छ ।
-वास्तुका अनुसार जहिले पनि आफ्नो टाउको दक्षिण वा पूर्व दिशामा पारेर सुत्नुहोस्, ताकि पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र अनुसार तपाईं लामो र गहिरो निद्रा पाउन सक्नुहुनेछ । आरामदायी र पूर्ण निद्राले विवाहित जीवनलाई अझ रमाइलो बनाउँछ ।
-पत्नी श्रीमानको देब्रेपट्टि सुत्नु राम्रो हुन्छ ।
-यदि कोठामा ड्रेसिंग टेबल छ भने सावधान हुनुहोस्, तपाईंको प्रतिबिम्ब ऐनामा नपरोस् । ऐनालाई ढाक्नुहोस् ।
-बेडरूममा मन्द प्रकाशको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर प्रकाश सिधा ओछ्यानमा पार्नु हुँदैन ।
-वास्तुका अनुसार शयनकक्षमा स्नानगृह हुनु हुँदैन किनभने दुवै व्यक्तिको ऊर्जाको आपसी आदानप्रदान स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन ।
-यदि तपाईं शयनकक्षमा स्नानागार राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई दक्षिण पूर्व कोणमा निर्माण गर्नुहोस् । यदि यो सम्भव छैन भने उत्तर–पश्चिम कुनामा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ ।
-ओछ्यानमा मयुरको प्वाँख राख्नुहोस् ।
-वास्तुशास्त्र अनुसार सुत्ने कोठामा पूजा स्थल बनाउनु वा देवीदेवताहरूको चित्र राख्नु ठीक हुँदैन । राख्नै चाहनुहुन्छ भने राधा–कृष्णको तस्वीर बेडरूमको शिरपट्टिको भागमा राख्न सक्नुहुन्छ ।
-यदि तपाईंको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन र वैवाहिक जीवनमा खुसी हुनुहुन्न क्रिस्टललाई चामलको दानासँग मिसाएर शयन कक्षमा राख्नुहोस् ।
-तामा र पितलको सिक्का रातो कपडाको झोलामा राख्नुहोस्।
– कहिलेकाँही शयनकक्षको विन्डोबाट नकारात्मक चीजहरू देख्न सकिन्छ, जस्तै सुख्खा रूखहरू, कारखाना चिम्नीबाट धुवाँ आएकोे आदि । त्यस्ता दृश्यहरूबाट जोगिन झ्यालमा पर्दा राख्नुहोस् ।
के गर्नुहुन्न ?
– बेडरूममा ऐना नराख्नुहोस्।
– टुक्रिएको गिलास कोठामा नराख्नुहोस् ।
– बेडरूम उत्तर दिशामा हुनुहुन्न ।
– ओछ्यान ढोका अगाडि हुनुहुँदैन । यदि छ भने उत्तर÷पश्चिम कुनामा पिरामिड मुनि कोरल स्टोन राख्नुहोस् ।
–बेडरूमको ढोका खोल्दा वा बन्द गर्दा कुनै प्रकारको आवाज आउनु हुँदैन ।
– कैंची वा आइरन जस्ता कुरालाई ओछ्यानबाट टाढा राख्नुहोस् । शयनकक्षमा पानीको तस्वीरवाला पेन्टिङ नराख्नुहोस् ।
– खराब एयर कन्डिसनर वा फ्यान जस्ता सामग्रीहरु जसबाट आवाज आउँछ, यसलाई तुरुन्तै अन्यत्र सार्नुहोस् । यस कारणले दम्पतीको सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ ।
– सुगन्धित मैनबत्तीहरू राख्नुहोस् ।
Previous articleआजको राशिफल – २०७८ फागुन १९ गते, बिहीवार
Next articleप्रकाश सपुतप्रति समर्थन आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन : बाबुराम भट्टराई
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै देशको राष्ट्रिय समस्या : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...
ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
मेष - ARIES - चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अहतारको निर्णयले काम रोकिन सक्छ। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्ला।...
प्रकाश सपुतप्रति समर्थन आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन : बाबुराम भट्टराई
काठमाडौँ महानगरपालिका नगरवासीहरुको निःशुल्क मिर्गौला जाँच